Inobungozi yeBlij: IiNkcazo, iiRegions kunye neNgcaciso
Iingozi zeBlij Realms, iiRgions kunye neNgcaciso
Inobungozi yeBlij (1935-2014) yayiyi-geographer eyaziwayo eyaziwayo kwizifundo zakhe kwimihlaba, i-geopolitical kunye ne-geografi yendalo. Wayengumlobi weencwadi ezininzi, unjingalwazi wejografi kwaye wayengumhleli weGeography we-ABC yeGood Morning America ukususela ngo-1990 ukuya ku-1996. Emva kwesigxina sakhe ku-ABC de Blij wajoyina i-NBC News njenge-Analytical Geography. UDe Blij wafa emva kokulwa nomhlaza ngoMatshi 25, 2014 eneminyaka engama-78.
U-De Blij wazalelwa eNetherlands kwaye ngokubhekiselele kwiSebe leJografi likaMichigan State University, wafumana i-geography imfundo kuwo wonke umhlaba. Imfundo yakhe yasekuqaleni yenzeke eYurophu, ngelixa imfundo yakhe yokufundela isikolo yagqitywa e-Afrika nakwi-Ph.D. Umsebenzi wenziwa eMelika eYunivesithi yaseNyakatho-ntshona. Kananjalo unamazinga ahloniphekileyo kwiiyunivesithi ezininzi zaseMelika ngenxa yomsebenzi wakhe. Kuyo yonke imisebenzi yakhe uDe Blij uye wapapasha iincwadi ezingaphezu kwe-30 kunye namaqaku angaphezu kwe-100.
IJografi: IiNkcazo, iiRiphabliki kunye neNgcaciso
Kwiincwadi zakhe ezingaphezu kwe-30, uDe Blij uyaziwa kakhulu kwiincwadi zakhe zeJografi: iiNkcazo, iiRegions kunye neNgcaciso . Le yincwadi ebalulekileyo ebalulekileyo kuba inika indlela yokuhlela ihlabathi kunye neendawo zayo eziyinkimbinkimbi. Intshayelelo yencwadi ithi, "Enye yeenjongo zethu kukunceda abafundi bafunde iziganeko ezibalulekileyo zeengcamango kunye neengcamango, kunye nokwenza ingqiqo yehlabathi lethu eliyinkimbinkimbi kwaye liguquguqukayo" (de Blij no Muller, 2010 iphe.
Ukuze ufezekise le njongo yeBlij ihlukanisa ihlabathi ibe yindawo kunye nesahluko ngasinye seJografi: Iingxelo, iiprojekthi kunye neengcamango ziqala ngencazelo yombuso othile. Okulandelayo, umbuso uhlukaniswe kwiindawo eziphantsi kwendawo kwaye izahluko zihamba ngxoxo malunga nommandla. Ekugqibeleni, izahluko zibandakanya iindidi zeengcamango eziphambili ezichaphazela kwaye zenze imimandla kunye neendawo.
Ezi ngcamango zincedisa ukunika ingcaciso ukuba kutheni ihlabathi lihlulwe kwiindawo ezithile kunye nemimandla.
KwiJografi: IiNkcazo, iiRiphabliki kunye neNgcaciso , i-Blij ibhekisela kwiimo "njengeendawo zomhlaba jikelele" kwaye uchaza "njengeyunithi yendawo yokwakha kwiqonga layo lehlabathi. Umbuso ngamnye uchazwe ngokwe-synthesis of geography of human geography ... "(de Blij no Muller, 2010 pp. G-5). Ngaloo nkcazo umbuso ngowona nqanaba eliphezulu phakathi kwe-Blij yokuphazamiseka kwehlabathi.
Ukuze achaze iindawo zakhe zendawo zeBlij zize zifikelele kwi-criteria ye-spatial criteria. Le miqathango ichaza ukufana phakathi kwendawo engqongileyo kunye nabantu, imbali yeendawo kunye nendlela ezi ndawo zisebenza ngayo ngezinto ezifana neendawo zokuloba kunye neendlela zokuhamba. Xa ufunda i-realms kufuneka kuphawulwe ukuba nangona iindawo ezinkulu zihluke komnye nomnye, kukho indawo yokutshintsha phakathi kwabo apho ukungafani kungadibana khona.
Iingingqi zeHlabathi zeJografi: Iingingqi, iiRiphabhliki kunye neNgcaciso
Ngokutsho kweBlij ihlabathi linama-12 ahlukeneyo kwaye indawo nganye iyahluke kwabanye ngenxa yokuba iindawo ezizodwa zendalo, izenkcubeko kunye neentlangano (de Blij no-Muller, 2010 iphe.5).
Iinjongo ezili-12 zehlabathi zilandelayo:
3) eMntla Melika
4) Ephakathi eMelika
5) eMzantsi Melika
6) I-Subsaharan Afrika
7) kuMntla Afrika / kumzantsi-mpuma we-Asia
8) eMzantsi Asia
9) E-East Asia
10) E-mpuma yeAsia
11) Indawo yaseAustralia
12) Indawo yasePacific
Ngayinye yale mimandla yindawo yaso kuba zihluke kakhulu. Ngokomzekelo, indawo yaseYurophu iyahluke kwiindawo zaseRashiya ngenxa yeengingqi zabo ezahlukeneyo, izibonelelo zendalo, iimbali kunye nezakhiwo zezopolitiko kunye noorhulumente. EYurophu, umzekelo, unemimoya ehluke kakhulu kwiindawo zayo ezahlukeneyo kodwa inxalenye enkulu yemozulu yaseRussia ibanda kakhulu kwaye ibuhlungu kangangokuba unyaka wonke.
Iimpawu zehlabathi zinokuhlulwa ngamacandelo amabini: ezo zilawulwa luhlanga olulodwa (eRussia umzekelo) kunye nalawo anamazwe amaninzi ahlukeyo (iYurophu ngokomzekelo).
Kwimihlaba nganye yeendawo ezili-12 kukho imimandla eyahlukeneyo kunye nezinye iindawo ezinokuthi zibe nemimandla engaphezulu kunezinye. Iingingqi zichazwa njengeendawo ezincinci ngaphakathi kwimihlaba eneempawu ezifanayo kwimimandla yazo, iimozulu, abantu, iimbali, inkcubeko, isakhiwo sezopolitiko kunye noorhulumente.
Indawo yaseRashiya iquka imimandla elandelayo: i-Russian core kunye ne-peripheries, i-Eastern Frontier, iSiberia kunye ne-Far East Far. Ngayinye yale mimandla ngaphakathi kwindawo yaseRashiya iyahluke kakhulu kwilandelayo. ISiberia ngokomzekelo ngummandla onabantu abaninzi kwaye unesimo esibi kakhulu, kubanda kodwa sisityebi kwimithombo yendalo. Ngokuphambene nomgaqo weRashiya kunye nama-peripheries, ngokukodwa kwiindawo ezungeze eMoscow naseSt. Petersburg, zihlala zihlala zihlala zihlala kwaye zize zihlala zihlala ziphezulu kuneendawo ezibhekiselele kuzo, i-Austral Realm, isimo semozulu sinamandla kunommandla waseSiberia ngaphakathi kweRashiya kummandla.
Ukongeza kwii-realms kunye nemimandla, u-Blij uyaziwa ngomsebenzi wakhe kwiingcamango. Iingcamango ezahlukeneyo zidweliswe kwiJografi: IiNkcazo, iiRegion kunye neNkcazo kunye neentlobo ezahlukeneyo zixutyushwa kwisahluko ngasinye ukuchazela iindawo ezahlukileyo kunye nemimandla ehlabathini lonke.
Ezinye iingcamango ezixutyushwa malunga nommandla waseRussia kunye nemimandla yayo zibandakanya i-oligarchy, i-permafrost, i-colonialism kunye nokunciphisa inani labantu. Ezi ngqiqo zizinto zonke ezibalulekileyo zokufunda ngaphakathi kwimihlaba kunye kwaye zibalulekile kwilizwe laseRashiya kuba liyenza ihluke kwezinye iindawo kwihlabathi.
Iingcamango ezahlukeneyo ezifana nalezi zenza imimandla yaseRussia ihluke komnye. Umzekelo we-Permafrost ngumzekelo ophawulekayo weendawo ezifunyenwe enyakatho yeSiberia eyenza loo mmandla uhlukile kwi-core yaseRashiya. Kwakhona kunokukunceda ukuba uchaze ukuba kutheni ummandla unabantu abaninzi kakhulu ukususela kweso sakhiwo kunzima kunoko.
Ziyizi ngcamango ezinje ezichaza indlela iimeko zehlabathi kunye neengingqi ziye zahlelwa ngayo.
Ubaluleka beeNkcazo, iiRiphabliki kunye neNgcaciso
Iingozi ezivela kwi-Blij, iindawo kunye nemiqondo yinto ebaluleke kakhulu ekufundeni i-geografi kuba imela indlela yokudiliza ihlabathi ukuba ihlelwe, kulula ukufunda izicatshulwa. Kwakhona indlela ecacileyo necacileyo yokufunda i-geographical geographical world. Ukusetyenziswa kwezi ngcamango ngabafundi, ootitshala kunye noluntu jikelele kuboniswa ekuthandweni kweJografi: IiNkcazo, iiRegions kunye neNgcaciso . Le ncwadi yaqala ukupapashwa ngo-1970 kwaye sele iguqulelwe iinguqu ezi-15 kwaye idayiswe ngaphezu kwei-1.3 million. Kwaqikelelwa ukuba isetyenzisiwe njengencwadi ye-85% yeeklasi ze-grade-grade ze-geografia zesithili.
Yintoni enokuyilindela kwi-Whitewater River Rafting Trip
UMdaniso weMdaniso yeSan
AmaSikh Baby Names Ukuqala kunye neG
Isiqalo 'seNkundla' kunye noko kuthetha ntoni kuma-Anime
Izambatho eziPhakanyisiweyo kwi-Intetho yoLuntu